CLUB NIGHT P.U.L.L. စော်ကားတာမဟုတ်ပါဘူး၊ ရှက်စရာပါ။ - ဆင်ခြေ
club night P.U.L.L. စော်ကားတာမဟုတ်ပါဘူး၊ ရှက်စရာပါ။
အဓိက / ဆင်ခြေ
ယခုရက်သတ္တပတ်အစောပိုင်းတွင် St. Andrews တက္ကသိုလ်သည် ၎င်းတို့၏ညဥ့်ဘဝအတွက် ပထမဆုံးနှင့် နောက်ဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ခေါင်းကြီးပိုင်းများကို မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။
တက္ကသိုလ်၏ FemSoc ၏ဖိအားပေးမှုကြောင့် ၎င်းတို့၏ကျောင်းသားသမဂ္ဂကလပ်ညများထဲမှတစ်ခုသည် ၎င်း၏အမည်ကိုပြောင်းခိုင်းခဲ့သည်။
ယခင်က P.U.L.L. ဟုလူသိများသောညသည် ယခုအခါတွင် အငြင်းပွားဖွယ်ရာနည်းပါးပြီး အမှတ်ရစရာနည်းသော The Bop ဟူသောအမည်ကို မူလအမည်သည် သင်းဖွဲ့ခြင်း၏ လိင်သဘာဝကို စိတ်မဝင်စားသောသူများနှင့် ကင်းကွာသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
St Andrews' FemSoc ၏ ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းရေးမှူး Jo Boon က မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ တွေးခဲ့သည် ။ ကျောင်းသူအားလုံး မပါဝင်ဘဲ အမည်မသင့်လျော်ကြောင်း တိုင်ကြားချက်တစ်ခု စတင်ခဲ့သည်။ တနည်းမဟုတ်တနည်းဖြင့် တညတည်း လက်မှတ်ပေါင်း ၅၀၀ ရရှိပြီး ရလဒ်အနေဖြင့် ကျောင်းသား သမဂ္ဂက လူထုဖိအားကို ဦးညွှတ်ခဲ့သည်။
တခြား club night name တွေလိုပဲ ယို့ယွင်းပျက်နဲ့ မေ့ပျောက်ဖို့ကောင်းတယ်။
SU သည် အမည်ကို အတိုကောက်သက်သက်ဖြင့် ခုခံကာကွယ်ခဲ့သည်။ ဘွဲ့လွန်နှင့် ဘွဲ့ကြိုများ၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ လုံး၀ အန္တရာယ်ကင်းပြီး မယုံနိုင်စရာကောင်းလောက်အောင် ယို့ယွင်းနေသော အမည်သည် ၎င်း၏အစတွင် စာလုံးများကို ပေါင်းထည့်လိုက်သောအခါတွင် အခြားအရာတစ်ခုကို ရေးပြလိုက်ပါသည်။ ဤအချက်သည် ဒေါသများကြားတွင် ပျောက်ဆုံးသွားပုံရသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ ကလပ်ညကို Postgraduates နှင့် Undergraduates Loveing ​​Life ဟုအမည်ပေး၍ အဆင်ပြေသောကမ္ဘာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ မည်သို့နေထိုင်နိုင်မည်နည်း။
ဘဝကို ချစ်ဖို့ ဘယ်လိုပြောရဲကြလဲ။ သူတို့ရဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို မေ့ပစ်ဖို့ ဒါမှမဟုတ် နာရီအနည်းငယ်ကြာအောင် အထီးကျန်အိပ်ရာကို ရှောင်ဖို့ ဒါမှမဟုတ် ITV ရဲ့ နောက်ထပ်စနေနေ့ညမှာ လွတ်မြောက်ဖို့ ၀ါသနာပါသူတွေ အားလုံးကော။ ဤလူများသည် ၎င်းတို့၏ညနေခင်းကို ချစ်မြတ်နိုးသောဘဝကို ဖြတ်သန်းရန် လိုအပ်ကြောင်း သိမ်ငယ်စိတ်ဖြင့် ပြောနေခြင်းကို သဘောပေါက်မည်မဟုတ်ပေ။
သိသာထင်ရှားသည်၊ ဤသည်မှာ ရယ်စရာကောင်းသော ငြင်းခုံမှုဖြစ်ပြီး ၎င်းကို ဆေးလိပ်သောက်သူတိုင်းက ရယ်မောကြလိမ့်မည်၊ သို့သော် စကားလုံးသည် လိင်ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်လျှင် ကွဲပြားသွားသည်မှာ ထင်ရှားပါသည်။
သူတို့ရဲ့အိတ်ကပ်ထဲမှာ အနည်းဆုံး ကွန်ဒုံးငါးခုနဲ့ ချောဆီပြွန်တစ်ခုရှိနေရင် ကလပ်က လူတွေကို ဝင်ခွင့်ပြုတာနဲ့ မတူပါဘူး။ shag ပေါ်လစီကို သင်ရှာဖွေနေချိန်တွင် ၎င်းတို့သည် ကွက်လပ်တစ်ခုအား လည်ပတ်လုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိသည့်အပြင် ၎င်းတို့သည် rohypnol daiquiris ကို ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမရှိပါ။ ချွေးစေးပြန်နေသော ကျောင်းသားသမဂ္ဂအခန်းထဲရှိ မင်းရဲ့ပုံမှန်စိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့ ကလပ်ညဟာ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဘဲ၊ ဒါပေမယ့် အနည်းငယ် နှိုးဆွပြီး လုံးလုံးလျားလျား ယိုစိမ့်စေမယ့် နာမည်တစ်ခုနဲ့။ အဆိုးဆုံးမှာ၊ ၎င်းသည် ရှက်စရာကောင်းသော်လည်း မည်သူ့ကိုမျှ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုစတင်ရန် တွန်းအားပေးနေခြင်းမဟုတ်ပေ။
ကလပ်ကိုသွားမယ့်လူတော်တော်များများက အဲဒီကိုဆွဲထုတ်ဖို့ရှိနေကြပြီး အဲဒီအချက်က လွတ်သွားစရာမရှိပါဘူး။ National Trust ပိုင်ဆိုင်မှုတွင် သင်တန်းသုံးကြိမ် ပျော်ပွဲစားပွဲအပြီးတွင် လူများစုဝေးနိုင်သည့် တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဟု သင်ထင်ပါက နိုးထလော့- လူအများစုသည် ၎င်းတို့ကို Jägerbomb၊ အကန့်အသတ်ဖြင့်ထုတ်ဝေသည့် Ted Hughes ကဗျာစာအုပ်မဟုတ်သော လူအများစုနှင့်အတူ အိပ်ရာဝင်ကြသည်။
ဒီလူတွေဟာ Pull လို့ခေါ်တဲ့ ကလပ်ကိုသွားနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Mutual Respect လို့ ခေါ်တဲ့ ကလပ်ကိုသွားနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကံကောင်းဖို့ အမြဲတမ်း အပြင်ထွက်နေကြတာပါ၊ ဒါကြောင့် နာမည်ကို ဟန်ဆောင်နေတာ ရပ်ပြီး စိတ်လျှော့လိုက်ပါ။
Spoons တွင် မည်သူမျှ ပွေ့ဖက်ထားပုံရသည်မှာ အကြောင်းပြချက် မရှိပါ။